DAAWO VIDEO: Casho sharaf loo sameeyay Wafdigii ka qeybgalay Shirka Iskaashiga ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Casho sharaf loo sameeyay Wafdigii ka qeybgalay Shirka Iskaashiga...
DAAWO VIDEO: Casho sharaf loo sameeyay Wafdigii ka qeybgalay Shirka Iskaashiga ee Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Ariimaha dibada Xukuumadda dalka ayaa xalay casho sharaf iyo sagootin us ameyay qaar ka mid ah wafdigii ka qayb galay shirka Madasha Islaashiga ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shalay galinkii dambe.
Qaar ka mid Safiiradda Wadamada saaxiibada dhaw la ah Soomaaliya sida Turkiga, Masar, Suudaan, Ugaandha, Kenya, Midogya Yurub, Wakiilka howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madera, Wakiilka QM ee Soomaaliya James Swan iyo wafood kala duwan ayaa xalay Wasaaradda Arrimada dibada XFS u sameyay casho sharaf kuwaas oo ka haray ku dhawaad wakiilo ka socday 50 dalka oo ka qeyb-galay shirkii Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo beesha Caalamka ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya danjire Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in kullankaan soo dhaweynta ee loo saameyay wafuuda kale duwan ay tahay in la tuso Caalamka in Soomaaliya ay tahay dalka lagu qaban karo shirarka Caalamiga ah dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad ku fiican soo dhaweynta dadyowga kala duwan.
Sidoo kale Wasiir Cawad waxa uu sheegay in haatan dalku uu ku sugan yihiin Safiiro badan walina ay sii kordhayaan dalalka doonayaan in Soomaaliya ay xariir ay la yeeshaan madaama uu kasoo kabanayo burburkii.
Casho sharaf loo sameeyay
wafdigii shirka madasha Iskaashiga ee Muqdisho